Glass butter churn ite
iko swiiti ite
iko nri ite
iko mmanụ aṅụ ite
iko Mason ite
iko ude ite
iko pudding ite
Glass ose ite
Nri Oil Glass Bottle
Glass onunu Bottle
Glass Mmiri ara ehi Bottle
Mmanụ oliv Glass Bottle
Reagent iko Bottle
Glass kandụl ite
Glass Cup ma ọ bụ Foto Ụlọ Nga
California wine karama
red wine karama
okpokoro isi isi okpokoro isi karama
Okpukpo Glass Bottle
Glass ịchọ mma karama
Glass ude mmiri karama
Liquid Ncha Bottle
Ntu Polish Glass Bottle
Senti iko Bottle
Xuzhou Yanjia glassware Co., Ltd. bụ ihe ulo oru na ahia ụlọ ọrụ tụnyere mmepe, imewe, mmepụta, ahịa na ahia. Anyị ụlọ ọrụ e hiwere na July 2009 na anyị nwere 7 ngalaba tinyere mba ọzọ ahia ngalaba, anụ ụlọ ahia ngalaba na mmepụta ngalaba na na. E nwere ihe karịrị 50 ọkachamara oru management ọrụ na ahịa faili na anyị ụlọ ọrụ.
Anyị na-enye ngwaahịa ihe karịrị 2000 iche tumadi na-agụnye iko karama, iko ite, dị ka olive mmanụ karama, osisi omenala karama, na ụdị nile nke onunu karama, wine iko karama, mmiri ara ehi iko karama, kọfị iko nchekwa ite, kandụl ịgụ, nchekwa ite, cosmetie karama, ihu ude ite na achara mkpuchi, na ụdị nile nke glassware, ose na ose grinder etc.Our ngwaahịa na-exported na United States, Russia, Canada, Australia, Vietnam na ihe ọ bụla ọzọ 100 mba na mpaghara.
Anyị nwere ikike na mbupụ ngwá ahịa na anyị nwere fọrọ nke nta ka afọ 10 nke mmepe na mmepụta ahụmahụ. Ịgbaso azụmahịa ụkpụrụ nke inyerịta uru, anyị nwere aha ọma n'etiti ahịa anyị n'ihi na anyị zuru okè ọrụ, àgwà ngwaahịa na asọmpi ahịa.
Anyị ụlọ ọrụ adopts elu mmepụta technology na miri nhazi technology na anyị nwere elu ule ngwá na ngwá, nke na-akwadebe anyị na ike mmepe ike, na anyị nwetara 7 mba imewe patent asambodo. Ogo nke iko ngwaahịa e nditịm achịkwa, nke meriri ihu ọma nke ma anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ahịa. E wezụga, anyị nwere a ọkachamara imewe otu na anyị nwere ike chepụta ọhụrụ ụdị nke karama na-eme ka ọhụrụ ebu maka ndị ahịa ka kwa ha chọrọ na obere oge. Anyị na-enye iche iche nke ahaziri miri nhazi maka iko karama, dị ka frosting, electroplating, spraying, decal na silkscreen, wdg Anyị na-enye ngwaahịa ihe karịrị 2000 iche tumadi na-agụnye karama ndị dị otú ahụ dị ka olive mmanụ karama, osisi omenala karama, nile di iche iche nke onunu karama, kandụl ịgụ, nchekwa ite, ntecha karama na ụdị nile nke glassware ihe metụtara chemical nnwale dị ka iko beaker, wdg Ke adianade do, anyị nwere a zuru okè ọrụ usoro na anyị nwere ike inye gị n'ụlọnga consignment dị ka Motor iga, ụgbọ okporo ígwè, oké osimiri iga na ikuku iga na na.
Nka na ụzụ na-akwado
Anyị nwere ike tọghata gị echiche na echiche n'ime a ezigbo ngwaahịa.
Anyị nwere onwe anyị mmepụta akara, na ike na-enye asọmpi price.
Site akụrụngwa ka ikpeazụ mmepụta, everystepare enyocha site anyị mkpara iji jide n'aka gị satification.
Anyị nwere ike na-emepụta na ngwaahịa dabeere ahịa requirements.Your imewe na sample na-nabatara.
Anyị ga ndokwa nwetara esikwa, iji jide n'aka na ngwongwo willbe ọma kwadebere dị ka ndokwa.
Abụ otu akụkụ nke ọdịnala